राति सुत्दा सिरानीमा यी ५ चिज राख्नुस् तपाईको जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ ! – Hamrosandesh.com
राति सुत्दा सिरानीमा यी ५ चिज राख्नुस् तपाईको जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ !
राति सुत्दा हामिले बिभिन्न सपनाहरु देख्ने गर्छौ । सुख शान्ति प्राप्त गर्न रातिको निद्रासँग गहिरो सम्बन्ध रहने गर्छ । यदि राति सुत्दा अफ्ठ्यारो पर्यो वा निद्रा परेन भने शरीर आलस्य हुन्छ । शरिरमा थकान महशुस हुन्छ । शरिरको थकान मेटाउन रातिको निद्राले मात्र सम्भब हुन्छ । शास्त्रका अनुसार सुत्ने समयमा यी पाँच चिज सिरानी मुनी राख्नु निकै राम्रो मानिन्छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी चिज सिरानी मुनि राखेर सुत्दा राम्रो मानिन्छ ।
हनुमान चालिसा – राति सुत्ने समयमा हनुमान चालिसाको पुस्तक पढेर सिरानीमुनी राख्नाले मनमा डर, त्रास र अहंकार हट्ने र मन एकाग्र भएर शान्त हुने गर्छ । जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥ रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनिपुत्र पवनसुत नामा ॥
दुर्गा सप्तसती पाठ – राति सुत्नु अघि दुर्गा सप्तसतीलाई सिरानी मुनि राखेर सुत्दा चिन्ता र तनावबाट मुक्ति भइने बिश्वास गरिएको छ । मुला – हरेक बेलुका सुत्नु अघि सिरानी मुनी राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलिङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल प्राप्त हुने बिश्वास गरिएको छ ।
फलामको उपकरण – सुत्नेबेला सिरानमुनि फलामको कुनै चिज राख्नाले भुत–प्रेत, ऐठन हुने समस्या बाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । शास्त्रका अनुसार सिरानमुनि फलामको कुनै चिज राखेर सुत्दा तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । बालवालिका सुत्ने बेला सिरानी मुनि सानो कैँची वा चकु राख्ने चलन पनि छ ।
फूल – सुत्ने बेला सिरानी मुनी भगवानलाई अर्पण गरेको फूल राख्दा मनमा शान्ति प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा निद्रा पनि छिटो लाग्ने र विहान उठ्दा ताजा महसुस हुने समेत शास्त्रले उल्लेख गरेको छ ।